15 Oktobra 2020 - FJKM Québec - Canada
15 octobre 2020 by Njaka Ramanandafy
Ny olona miandry ny fanjakan’Andriamanitra
MARKA 15 : 42-47
15:42 Ary nony hariva (satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan’ny Sabata),
15:43 dia avy i Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja, izay isan’ny Synedriona sady niandry ny fanjakan’Andriamanitra koa; ary sahy niditra tao amin’i Pilato izy ka nangataka ny fatin’i Jesosy.
15:44 Ary gaga i Pilato raha maty sahady i Jesosy, ka dia niantso ny kapiteny hankao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela Izy, na tsia.
15:45 Ary rehefa nahare tamin’ny kapiteny izy, dia nomeny an’i Josefa ny faty.
15:46 Ary izy nividy hariry madinika, dia nampidininy ny fatin’i Jesosy ka nofonosiny hariry madinika, ary naleviny tao amin’ny fasana, izay nolavahana tamin’ny vatolampy, dia nanakodia vato ho eo amin’ny varavaran’ny fasana izy.
15:47 Ary i Maria Magdalena sy i Maria, renin’i Josesy, dia nijery izay nametrahany Azy.
1-Mahafoy ny fombafomba nahazatra
« Dia avy i Josefa avy any Arimatia , lehilahy manan-kaja izay isan’ny Synedriona… » (and43a)
Andro fiomanana amin’ny Sabata lehibe ao anatin’ny herinandron’ny Paska , izay manomboka Sabata ka mifarana Sabata manaraka no nidiran’ i Josefa tao amin’i Pilato ka nangatahany ny fatin’i Jesoa , izay fady teo amin’ny Jiosy . Ary ny olona manao izany dia tsy mahazo mankalaza ny Sabatan’ny Paska. Nafoin’i Josefa ny fankalazana ny Paska noho ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra . Noho izany , ny olona miandry ny fanjakan’ Andriamanitra dia mahafoy ireo fombafomba noho ny fitiavana an’i Jesoa , Ilay hampiditra azy ao amin’ny fiainana mandrakizay amin’ny andro farany . Fianarana ho antsika rehetra koa izany .
2-Sahy miseho ho mpianatr’i Kristy
» sahy niditra tao amin’i Pilato izy ka nangataka ny fatin’i Jesoa » (and43b)
Fananan’ny Romana ny fatin’ny olona voahombo amin’ny hazo fijaliana ka avelany ho raraka eo izany , fa tsy azo averina any amin’ny fianakaviana anaovana fikarakarana , izay tena zava-dehibe teo amin’ny Jiosy . Maha-voaheloka ihany koa ny fisehoana ho naman’ny olona voaheloka tahaka izao . I Josefa , ilay mpianatr’i Jesoa di a tao amin’ny mandgingina no nangataka ny fatin’i Jesoa noho ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra . Araka izany , ny olona te- handova ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy menatra amin’ny maha- mpianatr’iJesoa azy , ilay voahombo teo amin’ny hazo fijaliana . Sahy nijoro ho mpianatr’i Kristy izy na dia tao anatin’ny fotoana sarotra aza . Fianarana ho antsika rehetra izany .
Ahoana no hialanao amin’ireo fombafomba mbola ataonao nefa manakana anao tsy handova ny fiainana mandrakizay ?